Igodo na Google Maps melite budata | Gam akporosis
Google meziwanye ahụmịhe igodo nke ọma na Maapụ
Street View ọ bụghị mgbe niile ka kacha mma ngwa iji nye ezigbo ahụmịhe nchọgharị na-enweghị nsogbu. Ọrụ ya pụrụ iche mere ka anyị chefuo ụfọdụ nkwarụ ya dị ka ịgagharị n'okporo ámá dị iche iche ma ọ bụ ụzọ nke anyị nwere ike isi na-agagharị nke ọma. Afọ ole na ole gara aga ọ bụ ihe a na-anụtụbeghị na ya na-eju anya, mana taa, na mgbanwe nke teknụzụ, anyị nwere olile anya na n'oge ụfọdụ ha ga-agbada ọrụ ma nyekwa ahụmịhe ọzọ na nyocha.
Google n'ikpeazụ dochiela akụ ochie ndị ahụ maka atụmatụ nke metụtara mmegharị ahụ ka ịgagharị site na ịgagharị Maps dị oke mmiri ma dịkwa mfe iji. N'ụzọ dị otu a, ahụmịhe enwetara na-akwalite nke ọma ma ị ga - enwe ike inyocha saịtị ọ bụla n'ụzọ dị mfe ma na - enweghị ike ịrapara na ngwa ahụ dịka ọ dị na mbụ.
Zọ o si arụ ọrụ dị mfe ma ugbu a vị ga-acha anụnụ anụnụ akara na a dọtara ebe niile ka inwee ike inyocha. Naanị tinye mkpịsị aka gị na ahịrị ahụ wee malite ịdọrọ ya gafee ụzọ ịchọrọ ịga. E meziwanyela nhọrọ iji nwee ike ile anya na ntụpọ nke mmadụ na-ahụ iji mara nke ọma ebe ụzọ ga-esi gafere.
Loading ka e mma na ole na ole ngwa swipes i nwere ike fọrọ nke nta ka ọ dị gị ka ị na-efe efe site na mpaghara nke obodo ma ọ bụ obodo ebe ị na-aga. Naanị ihe na-agbanye oge Maps na-ejide onwe gị mgbe ị gafere n'akụkụ ụfọdụ ebe Google debara aha ụzọ dị iche iche.
N'oge ọ na-arụ ọrụ site na ihe nkesa, yabụ ị nwere ike ịnwe nsụgharị 9.26.1 wee chọpụta na ịnweghị ya. Ihe omuma ohuru nke na-abia n'otu oge dika ihe ochie mbipute nke Maps.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google meziwanye ahụmịhe igodo nke ọma na Maapụ
Mepee Igwefoto, igwefoto foto maka Android Open Source na ọtụtụ nhọrọ nhazi